Silicone kubheka mat: kusarudzwa uye kutarisirwa | Inobatsira ruzivo kune wese munhu
Silicone kubheka mateki akanaka nekuti:
zvinhu zvakabikwa hazvipise;
Unogona kuenderera mberi nekunyora iwo maficha ezve silicone rug, asi pasina mubvunzo, hapana chekuita mukicheni pasina ivo. Zvese zvako zvigadzirwa zvekugadzirira zvakabikwa pamubhedha wesilicone zviri nyore kubvisa.
Mashandisiro ekushandisa silicone mats
Pamasikisi ekubheka esilicone, unogona kubheka zvakasiyana siyana zvinonaka, zvinogona kunge zviri makuki, mabhisikiti, mapai, pizza nezvimwe zvakawanda.
Izvo zvakakosha kuti urangarire kuti zvinokwanisika kubheka pane silicone mateti kusvika ku200 иC uye usayedze kucheka pane silicone rug, sezvo banga mucherechedzo richaramba richiripo, rug iri rakanyorovera.
Silicone yekubheka mateki inouya muhukuru hwakasiyana uye pakukora, iine huwandu hwakawanda hwe7mm.
Silicone kubheka mateti inogona kuchengetwa mufiriji nezvakapedzwa zvigadzirwa.
Mukutarisira, machira esilicone ekubheka haana mwero uye akapusa, anoshambidzwa nyore nyore nemidziyo yekushambidza yemidziyo nejira rakapfava kana chipanji, ita chokwadi chekuomesa rugi, asi usapukuta nejira, sezvo lint inogona kuramba iri pairi, uye izvi hazvifadzi.
Nzira Yokusarudza Yakanakisa Silicone Kubheka Mat?
Posted in Desserts, Sweets, Baking
Mibvunzo ye58 mu database yakagadzirwa mu 0,350 masekondi.